Hoggaamiyayaasha Afrika oo riixaya in maxkamadda Kenyatta loo soo wareejiyo Kenya - Sabahionline.com
Hoggaamiyayaasha Afrika oo riixaya in maxkamadda Kenyatta loo soo wareejiyo Kenya
Wasiirrada arrimaha dibadda Afrika ayaa isku raacay Jimcihii (24-kii Maajo) in ay diyaariyaan qoraal ay ku soo jeedinayaan in dacwooyinka Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ee loo haysto Madaxeynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo kuwa ay dal-wadaagga yihiin loo soo wareejiyo Kenya, sidaana waxa sheegay AFP.
ICC oo nabad-galyada markhaatiga dartii dacwadda Ruto ku qaadaysa fadhiyo xirran
Midowga Afrika oo ka dalbaday ICC in uu dib u dhigo dacwadda hoggaamiyayaasha Kenya
Wasiirka Arrimaha Dibadda Sudan Nhial Deng Nhial ayaa sheegay in go'aanku uu helay "ku dhawaad dhammaan taageerada" kulankii wasiirrada arrimaha dibadda ee horudhaca u ahaa shir-madaxeedka Midowga Afrika ee furmaya Axadda. Inta uu socdo shir-madaxeedka, ayaa waxa la filayaa in hoggaamiyayaasha Afrika ay si kama-dabays ah u saxiixaan qaraarka aan sharciga noqoneeyn.
Midowga Afrika ayaa sidoo kale qorsheeynaya in uu bilaabo maxkamad caalami ah oo u gaar ah si ay u ilaaliso madax-bannaanida waddamada Afrika, sidaana waxa sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Tansaaniya Bernard Membe, sida laga soo xigtay Daily News-ka Tansaaniya.
"Waxan dhexda uga jirnaa in aan furno maxkamad caalami ah oo noo gaar ah taasoo caawin doonta Afrikaanka iyada oo laga duulayo mabaadii'dooda caddaaladda, gaar ahaan marka arrinku joogo hoggaamiyayaasha Afrikaanka, taasoo sidoo kale xisaabta ku darsan doonta mabaadii'da hannaanka dimuqraadiyadda," ayuu Membe ka yiri dabaal-daggii sannad-guurada 50-aad ee Daarusalaam loogu sameeyay asaaskii Ururka Midowga Afrika, ee ah kii horreeyay Midowga Afrika.
"Waxaa sharaf noo ah in aan ku noolnahay qaarad dimuqraaddi ah, laakiin mararka qaar waxa naga horyimaada caqabado kuwaa oo qaar ka mida dalalka awoodda leh ay u soo jeestaan faragalinta madax-bannaanideenna iyaga oo ka fakaraya danahooda iyo waxa faa'iidadu ugu jirto," ayuu yiri.
May 27, 2013 @ 12:50:54PM
Waxay ay hogaamiyayaasha Afrikaanka ahi soo jeediyeen waa maalayacni. Waa inay fahmaan in dad ka badan 1000 qof oo u dhashay dalka Kenya la laayay, halka ay dad gaadhaya 300,000 oo kalena ay barakeceen. Markaa fikradoodani waa mid gabi ahaamba aan u cuntamayn dadka rabshadaha ku waxyeeloobay. Sababta ay soo jeedintan ugu dagdageen waxa weeyaan hogaamiyayaashani dhamaantood waa sharwalayaal, waxaanay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda bini’aadamka dhamaantood ka gaysteen dalalkooda, halkaasoo dadka bilaa sabab loo laayo. Tusaale ahaan, dadka reer Tanzania si aan loo kala aabayeelin ayaa loo afduubaa, waxaana la sheegay inay xukuumadu arrinka ku lug leedahay. Sidaa awgeed, dadka qaar badan maxkamadu khatar ayay ku tahay, waxaana taa u sabab ah falalka xukuumadohoodu gaystaan. Nimankani iyagaa saxeexay sharciga maxkamada, ee cidi kumay qasbin. Waa wax laga murugoodo in ay hogaamiyayaasha afrikaanka ahi ay adoomo u noqdaan Kenyatta, taasoo ay sabab u tahay lacagta uu haysto, laakiin arrinkaasi maaha mid la aqbali karo. Waxaa markaa la qaatay in cid kastaa ay qorigeeda qaadato oo aysan wax cadaalad ahi jirin.